Kpebie mgbe ị ga-amụ ihe na ebe ị ga-anọ amụ ya. Olee mgbe obi gị na-aka adị n’ihe ị na-amụ? Ọ̀ bụ n’isi ụtụtụ tupu ị gawa ọrụ ka ọ̀ bụ n’abalị mgbe ụmụ gị labara? Ọ bụrụgodị na ọ na-esiri gị ike ịmụte ihe aka, kpebie nkeji ole ị ga-eji na-amụ ihe, hụkwa na i ji nkeji ole ahụ na-amụ ya. Nọrọ ebe ụzụ na-adịghị, gbanyụọkwa redio, televishọn, na ekwentị gị ka ha ghara ịdọpụ gị uche. Ọ bụrụ na i kpee ekpere tupu ị mụwa ihe, ọ ga-eme ka obi gị dịrị n’ihe ị na-amụ. Ị gaghịkwa na-eche gbasara nsogbu dịịrị gị.—Ndị Filipaị 4:6, 7.
Ọ bụrụ na ị na-amụ isiokwu a ga-amụ n’izu ọ bụla, a ga-enwe ihe ọhụrụ ị ga-amụta na Baịbụl. Nwayọọ nwayọọ otú ahụ, ị ga-eji Okwu Chineke kwajuo ‘ụlọ akụ̀’ gị.—Matiu 13:51, 52.
mailto:?body=Olee Otú Kacha Mma Anyị Ga-esi Na-akwadebe Ọmụmụ Ihe?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102012150%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Olee Otú Kacha Mma Anyị Ga-esi Na-akwadebe Ọmụmụ Ihe?